Home Business Local Page 58
TMH Diversifies into Media and Entertainment
Myo Sandar TMH Telecom, one of the five listed companies in Myanmar, signed an investment deal with film production company Big5Production on December 10 inabid to diversify its revenue sources beyond the core telecom business. The film production industry is consideredapotential new business area for...
Rice wholesale markets to reopen
နွေစပါးဈေးကျဆင်းခြင်းမရှိစေရန် ဧပြီ ၂၇ ရက်မှ စတင်၍ ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် Covid-19 ကြောင့် ပိတ်ထားသည့် ဆန်ကုန်စည်ဒိုင်များကို ဧပြီ ၂၇ ရက်မှ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်းမှ သိရသည်။ ယင်းသို့ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်သို့ လာရောက်မည့် ဆန်ကုန်သည်များသည့် နံနက် ၇ နာရီမှ နံနက် ၉ နာရီခွဲအထိ ဆန်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကုန်စည်ဒိုင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်ဆိုပါက Mask မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်းမှ သိရသည်။ ဧပြီလကုန်နှင့် မေလအတွင်းတွင် နွေစပါးရိတ်သိမ်းသည့် ကာလဖြစ်သောကြောင့် နွေစပါးဈေးနှုန်းများကျဆင်းခြင်းမရှိစေရန်နှင့် တောင်သူများနစ်နာခြင်းများမရှိစေရန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝါးတန်းဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်မှ သိရသည်။ ရောင်းချမည့်သူများအနေဖြင့်လည်း ဆန်နမူနာထုပ်များသာ ယူဆောင်လာရန်နှင့် ဆန်နမူနာများပြသခြင်းကိုလည်း လက်အိတ်များစွပ်၍ ပြသရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသည့် အကွာအဝေးတွင်သာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရမည်ဟု...
Brioni Girds for Menswear Combat
Guy Trebay (The New York Times) FLORENCE, Italy Consistency isatough sell in an age of obsolescence. Say what you will about sustainability, few 21st-century habits die harder than consume and discard. Thus, whenalabel like Brioni decides to celebrate its 75th anniversary with an elaborately staged presentation in a...
Factories to be allowed to reopen if they meet the requirement
စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှသာ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည် COVID-19 ရောဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန၏ အကြံပြုချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာနမှ ဧပြီလ ၁၉ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း အဖွဲ့များသည် ဧပြီလ ၂၀ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အထိ သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ကနဦး ဦးစားပေးအနေဖြင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ၊ စားသောက်ကုန်...
Myanmar’s First Livestock Expo to Be Held in May
Myanmar Livestock Expo 2020, the first event of its kind in the country, will be held May 14-16 at Yangon Convention Center. The expo will feature products and technologies for livestock breeding, including antibiotics, feed processing equipment and packaging technologies, as well as seminars on livestock-related manufacturing and technologies and...
Chinese Visitors Surge After Visa Relaxation
Myanmar last year relaxed visa requirements for visitors from China, Japan, South Korea and Macao, allowing these nationals to obtain visa-on-arrival at international airports across the country. The change resulted ina35 percent increase in air travel into the country andasurge in the number tourists entering...
The Unforeseen Risks ofaDevice to Curb Drunken Driving
http://URL: https://www.nytimes.com/2019/12/23/business/drunk-driving-interlock-crash.html Stacy Cowley and Jessica Silver-Greenberg (The New York Times) Over the past decade, states have increasingly turned toapowerful tool to stop drunken driving before it starts: Miniature breathalyzers, wired intoacar’s electronics, that prevent the engine from starting unless the person behind the wheel is sober enough...
Industrial body calls for unpaid leave for workers unable to come to work
Covid-19 ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင့်သို့ အချိန်မှီမရောက်နိုင်သည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်သမားများကို ဧပြီ ၂၀ ရက်မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်အထိ လစာမဲ့ခွင့်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်လုပ်သူများအသင်းမှ ဧပြီ ၁၈ တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းသို့ ဧပြီ ၂၀ ရက်မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်အတွင်း ၁၁ ရက် ကြာ လုပ်ငန်းခွင့်သို့ လာရောက်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် အလုပ်သမားများသည့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ ဆက်သွယ်၍ ခွင့်တိုင်ကြားပါက လစာမဲ့ခွင့်ပေးရန် တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် Covid -19 ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကြုံတွေနေရခြင်းကို လျော့နည်းစေရန် ယင်းသို့ လစာမဲ့ခွင့့်ပေးရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကာ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်...
U.S., Allies Believe Missiles Fired by Iran Downed Ukrainian Jet
Julian E. Barnes, Eric Schmitt, Anton Troianovski and Natalie Kitroeff (The New York Times) WASHINGTON American and allied officials said January9that they had intelligence that missiles fired by Iranian military forces were responsible for the downing ofaUkrainian jetliner in Iran and the deaths of all aboard earlier...
Ministry Issues Criteria for Farm Commodity Exports
The Ministry of Commerce last year announcedalist of items foreign and joint-venture companies are allow to buy and export. The list includes meat, fish, value-added crops, pulp and paper, seeds, purified metals, semi-finished vegetable products and wood-based furniture. On February 4, the ministry released detailed criteria for commodity...
1...575859...79Page 58 of 79